အဖွဲ့ထဲမှာ အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်သလို အရပ်အပုဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့ Kpop အမျိုးသား Idol ၇ ဦး | News Bar Myanmar
အဖွဲ့ထဲမှာ အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်သလို အရပ်အပုဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့ Kpop အမျိုးသား Idol ၇ ဦး
K-Pop idol တွေထဲမှာ အရပ်ရှည်တဲ့သူတွေရှိသလို အခြားအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ယှဥ်ရင် အရပ်ပုပုသေးသေးလေးနဲ့ မြင်လိုက်ရင်ကို ဖျစ်ညှစ်ပစ်ချင်စရာ အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအသိများတဲ့ အသက်အကြီးဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး ပုပုသေးသေးလေးတွေဖြစ်တဲ့ Kpop အမျိုးသားအဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Jay (iKON) – 165 cm (5’5″)
Kpop idol တွေထဲမှာ Jay ကိုတော့ အားလုံးသိကြမှာပါ။ iKON ရဲ့ အသက်အကြီးဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သလိုပဲ သူ့ရဲ့ပုပုသေးသေးပုံစံလေးကြောင့် အဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှာတမူထူးခြားနေသလို ပရိသတ်တွေက အချစ်ပိုနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
2. Jinho (PENTAGON) – 168 cm (5’6″)
PENTAGON ရဲ့ အခြားအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ယှဥ်ရင် Jinho ကိုတော့ သူ့ရဲ့အရပ်လေးကြောင့် လူအများကချစ်ကြပါတယ်။ အသက်အကြီးဆုံးအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တာကြောင့် အငယ်လေးတွေရဲ့ အစအနောက်ကို မကြာခဏခံရပြီး ဒါဟာလည်း Jinho ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုပါပဲ။
3. Xiumin (EXO) – 173 cm (5’8″)
EXO အဖွဲ့ရဲ့ အသက်အကြီးဆုံးအဖွဲ့ဝင် Xiumin ကလည်းတခြားအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ယှဥ်ရင် ပုပုသေးသေးလေးဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက အူယားနေကြသလို တစ်ခါတရံမှာတော့ EXO ရဲ့ အငယ်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်လို့တောင် အထင်မှားမိကြပါသေးတယ်။ အသက်ကြီးလာတာတောင် ဘာမှပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိတာကြောင့် Xiumin ဟာ ပုလို့နုတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြုနေပါတော့တယ်။
4.Taeil (NCT 127) -171 cm (5’7″)
NCT 127 ထဲက ကျန်တဲ့ညီအစ်ကိုတွေနဲ့ယှဥ်ရင် Taeil က အရပ်အပုဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ အသက်အကြီးဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သလို သူ့ရဲ့စွမ်းရည်၊ ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကောင်းမှုတွေကြောင့် အငယ်လေးတွေရဲ့ယုံကြည်အားကိုးခြင်းခံရတဲ့ အစ်ကိုကြီးပါပဲ။
5. Taeil (Block 😎 – 167 cm (5’6″)
Block B အဖွဲ့ဝင် Zico ကတော့ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့အကြီးဆုံးအစ်ကိုကြီး Taeil နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ Taeil ဟာ သူ့ရဲ့ပုပုနုနုပုံစံလေးကြောင့် အသက်ကြီးလာတယ်လို့တောင် မထင်ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ပုလို့နုနေတာဆိုပြီး Taeil ကို မကြာခဏစနောက်လေ့ရှိပါတယ်။
6. Choi In (E’Last) – 170 cm (5’7″)
ပုပုသေးသေးနဲ့အသက်အကြီးဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ E’Last ရဲ့ Choi ကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အငယ်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်လို့အထင်မှားလေ့ရှိကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အရပ်ကြောင့်ပဲ ချစ်စရာလည်းကောင်းသလို နုပျိုတဲ့အသွင်အပြင်ပါဖော်ဆောင်နေပါတယ်။
7. N (VIXX) – 180 cm (5’11”)
N ရဲ့ ၅ ပေ ၁၁ လက်မဆိုတဲ့အရပ်ကတော့ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့ယှဥ်ရင် အရပ်ရှည်တဲ့အထဲပါပေမဲ့ တကယ်တမ်း VIXX အဖွဲ့ထဲမှာတော့ N ဟာ အရပ်အပုဆုံးပါတဲ့။ ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ သူ့ထက်ပိုပြီးအရပ်ရှည်နေတာကြောင့် N ကတော့ အရပ်ပုတဲ့ အသက်အကြီးဆုံးအဖွဲ့ဝင်စာရင်းထဲကို ပါလာပါတော့တယ်။
Next စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး​နောက် ကိုယ့်လမ်းကိုယ်​လျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတဲ့ IZ*ONE အဖွဲ့ဝင်များ »
Previous « 2021 အတွက် ARMY တို့ရဲ့အသည်းကျော်လေး BTS V ရဲ့ ဆန္ဒလေးက...